Ogaden News Agency (ONA) – Xamaas oo sheegtey in ay diyaar u tahay wada hadalka PLO.
Xamaas oo sheegtey in ay diyaar u tahay wada hadalka PLO.
Posted by Wariye Qaran	/ September 18, 2017
Ururka Xamaas ee ka taliya marinka Qasa ee dhulka Falastiin ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Dowlad Midnimo la dhistaan dhaq-dhaqaaqa Fatax ee PLO.
Bayaan ka soo baxay ururka Xamaas ayaa lagu sheegay in ay oggolaadeen xujooyinkii Madaxweyne Maxmuud Cabbaas (Abu Mazin) uu ku xirey wada hadalka labada garab ka hor doorasho guud ee ka dhacda maamulka Falastiin.
Dhaq-dhaaqaaq Fatax ayaa maamulkoodu ku kooban yahay daanta galbeed ee ay haystaan Israiliiyiintu, halka Xamaas ay ku kooban tahay marinka Qasa.
Xamas iyo PLO ayaa dagaalo culus dhex mareen sanadkii 2007, waxaana Xamaas ku guuleysatey in ay PLO ka saaraan marinka Qasa. Tan iyo markaas maamulka Falastiin ayaa u qaybsanaa laba kooxood oo iska soo horjeeda.
Bayaanka ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in ay Madaxweyne Cabbaas ku casumayaan marinka Qasa. Maamulka Xamaas waxaa daciifiyey cunno qabateynta ay ku hayaan Israel iyo Masar.
Wararku waxay sheegayaan in wada hadal ay yeeshaan Xamaas iyo PLO ay ka soo shaqeysey dowladda dalka Masar. Ismaaciil Hanniyah oo metalaayey Xamaas ayaa todobaadkii hore Qaahira kula shirey ergo ka socotey Fatax.